नेपाली क्रिकेट फेरी माथी उठ्न सक्ला ?
२०७६ चैत्र ९ , आईतबार ०९:०३ मा प्रकाशित
अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटमा छोटो समयमै गतिलो छलाङ मारेको नेपालले त्यस्तै समयमा आफ्नो लय पनि गुमाएको छ । डिभिजन पाँचबाट बिश्वकपसम्मको यात्रा तय गरेको नेपाल अहिले सबरिजनल छनोटबाट माथी उठ्न संर्घष गरिरहेको छ । सन् २००३ यता नेपाली क्रिकेटमा आएको उतारचढावले मुख्य रुपमा आम नेपाली क्रिकेट समर्थकलाई नराम्ररी पिरोलेको छ । कठिन परिस्थितीमा पनि टोलीको साथ र समर्थनमा रहेकै कारण अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट परिषदलाई पुर्ण बन्देज लगाउन अप्ठेरो परेको परिदृश्यमा होस वा घरेलु मैदानमा अन्तराष्ट्रिय खेलका समय समर्थनमा उत्रिएर । नेपाली क्रिकेट समर्थकले आफ्नो भुमिका पछिल्लो अवस्थासम्म पनि उहि अवस्थामा राखेका छन् । तर टोलीको प्रर्दशनमा भने निक्कै गिरावट आएको छ । बलिया टोलीलाई पनि हराउन सामथ्र्य राख्ने नेपाल अहिले वरियतामा आफुभन्दा निक्कै तल रहेका तथा अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटमा भर्खर पाईला चाल्दै गरेका मुलुकसंग स्तब्ध हुदै आएको छ ।
त्यसो त नेपाली क्रिकेटले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा केहि राम्रा खेलाडी पनि यहि परिस्थितीमा जन्म दिएको छ । राष्ट्रको नाम र पहिचान बोक्न सफल क्रिकेटर भएकै समय नेपाली क्रिकेट निक्कै कमजोर पृष्ठभुमीका साथ गुज्रीरहेको छ । यसले भावी अवस्थामा केहि चुनौती भने अवश्य थपेको छ ।
आखीर किन यहि अवस्थामा नेपाली क्रिकेट यति कमजोर बन्यो त ? कारण धेरै भएपनि मुख्य चिन्ता खेलाडीको फर्ममै रहेको छ । क्षमता भएका खेलाडीहरुपनि आफ्नो लयभन्दा बाहिर जाँदा त्यसको समग्र भागीदार टोलीको नतिजामा परिरहेको छ । धरैको प्रश्न छ– के नेपाल अब यहि अवस्थाबाट माथी उठ्न सक्छ ?
सिमित विकल्पका साथ अघि बढ्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको नेपाल क्रिकेट संघ क्यान पुर्ण अधिकारसहित आईसीसीबाट फुकुवा भएको छैन् । केहि सर्तका कारण उसले स्वनिर्णय लागु गर्न नसक्दा केहि समस्या देखीएको छ । यहिबिचमा खेलाडीहरुबिचमा पनि केहि तालमेल मिलेको छैन जसको असर हामीले विगत २ बर्षयताका नतिजाहरुबाट सहजै अनुमान लगाउन सक्छौ । केहिथरीले क्यानको नेतृत्वसंग खेलाडी बेमेलताको असर टोलीको नतिजामा पर्ने गरेको बताईरहदा त्यसलाई पनि सहजै नकार्न सकने अवस्था छैन । आवश्यक पुर्बाधारको अभाव ज्यु का त्युँ रहनु, प्रशिक्षकलाई निरन्तरता दिन नसक्नु, खेलाडी छनोटमा उचित ध्यान दिन नसकनुका साथै टोलीभित्रका खेलाडीलाई एकसुत्रमा बाध्न नसक्नु नै नेपाली क्रिकेट पछि पर्दै जानुका मुख्य कारण हुन् ।
आफ्नो जिम्मेबारीबाट खेलाडीहरु टाढिदैगएसंगै नेपाली क्रिकट दिनप्रतिदिन धरासायी बन्दै गएको छ । यसैमा सबैको चासो र चिन्ता बढेको हो ।
अब क्यानको नेतृत्वले निक्कै सुझबुझ तबरले यी समस्याको समाधानको पहल गर्न जरुरी छ । नत्र नेपाली क्रिकेट सन्दिप लामिछानेले भने जस्तै एकादेशको कथा बन्ने निश्चित छ ।